यसरी तातिँदै छ पृथ्वी, काठमाडौंको अवस्था के ? | NiD - News
यसरी तातिँदै छ पृथ्वी, काठमाडौंको अवस्था के ?
अन्नपूर्ण पोष्ट, साउन १८, २०७६
लन्डन (बीबीसी) : जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तामक्रम बढ्दै गएको छ। सन् २०१९ को जुलाई अहिलेसम्मकै तातो महिना साबित भएको छ। वैज्ञानिकहरूले विश्वको तापमान औसत १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन चेतावनी दिएका छन्। तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण सन् १८५० देखि १९०० को अवधि अत्यधिक तातेको थियो।त्यसयता १ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढिसकेको छ।